UNike Swoosh: Imbali ye-Iconic Sneaker Logo Design - Iinkoka
Imbali ye-Swoosh kwii-Nikes Sneakers
I-Nike yayineStripe ngaphambi kokuba nabani na ayibize ngokuba yiSwoosh. Kwaye i-Swoosh, kunye nenqaku layo lokuqala lokuyilwa, yakhonza ngakumbi njengemephu yendlela yabayili bezihlangu kunomthetho onzima kwaye okhawulezayo. Njengoko sibona uyilo olutsha lweNike luza kwintengiso ngaphambi kwesikhumbuzo seminyaka engama-50 seSwoosh, njenge UKULUNGISELELA x Nike Blazer -Izaliswe kukuhomba kwe-Swoosh-kunye noyilo loyilo lwe-Swoosh ngokubalaseleyo kwincwadi entsha yeVirgil Abloh Icons, iyaphawula kwiintsuku zokuqala zikaNike xa abayili babenokuxela ukuba ngubani owenza isihlangu ngokusekwe kubume beSwoosh. Kule mihla iSwoosh imele zonke izinto zeNike. Izimele yodwa njengophawu, ibonisa uphawu kunye nenkcubeko. I-Swoosh imele ngaphezu kwelogo.
Ikhekhe le-strawberry ukusuka ekuqaleni ngaphandle kwejello
Ekuqaleni wabizwa ngokuba yiBlue Ribbon Sports, uPhil Knights osandula ukubizwa ngokuba nguNike ngo-1971 wayefuna uphawu olusemthethweni. Ke, uKnight, owayengumqeqeshi wezobalo kwiDolophu yasePortland State University, waguqukela kumfundi oyiliweyo wokuyila umzobo, uCarolyn Davidson, ukuba enze ilogo yophawu oluthiywe ngegama lesithixokazi samaGrike soloyiso.
UDavidson, efumana i-2 yeedola ngeyure, wachitha iiyure ezili-17.5 esebenza kule projekthi, ngokwembali kaNike, ngetyala elipheleleyo leedola ezingama-35, zonke zinenjongo yokubonisa intshukumo ngeStripe. Uthikazikazi wakhonza njengokhuthazo. Ngo-Nike uthixokazi, hayi uphawu, owaziwa ngokubaleka kwakhe kunye neepiko kwiintsomi zamaGrike, uDavidson wenza imigca egosogoso ekhumbuza iphiko, esenza uyilo lwetsheki ngelixa kuvavanywa inkangeleko ngokugquma iphepha leethishu ngeelogo zezihlangu.
Uyilo lwantlandlolo lweNike Swoosh nguCarolyn Davidson ukusukela ngo-1971
Ngelixa u-Davidson enikezela ngokwahluka kumanqaku amathandathu ku Knight kunye nabaphathi u-Bob Woodell kunye noJeff Johnson, yayiluphawu lokujonga olugobileyo oluneligama elinguNike kwisikripti esitsalwe ngesandla kuyo eyakhokelela ipakethe, nokuba uKnight wathi ngelixesha wayengenalo uthando kuyilo. Oko kwatshintsha ngokukhawuleza, nangona ilogo yaba luphawu lwaseburhulumenteni lweNike nge-US Patent Office nge-18 kaJuni ngo-1971. Uphawu olo lwafumana igama lalo, uSwoosh, enkosi kwisandi se-whoosh esenziwe zizihlangu xa zibaleka.
UMichael Raisch, ngoku ongumyili oyintloko kwi-NFL, uthi uphawu lweNike lunobume obulula malunga naloo nto inqwenelekayo namhlanje.
yintoni ibhola yedragini malunga
Yayiyimo yomoya osemoyeni, ukuma kwayo, kunye nesibindi, utsho. Isebenza ngokugqibeleleyo kwaye icocekile kwaye icocekile. Ndicinga ukuba yile nto isebenza kakuhle ngayo, kwaye yasinda kwiminyaka.
I-Swoosh yenza umthengi wayo wokuqala kwi-Nike Cleat, esinye sezihlangu zokuqala ezivela kuhlobo, kwaye yavela kwi-Nike Waffle Racer eyaziwayo kwi-US Track and Field Trials Trials e-Eugene, Oregon, kodwa abathengi babengenakukwazi ukufumana izandla zabo loo modeli kude kube ngo-1973. I-Nike Cortez, eveliswe ngexesha lee-Olimpiki zaseMexico ngo-1972, yayingumntu wokuqala ukwamkela iSwoosh. Ukuzalwa kweNike Basketball kwi1972 ngeBruin kubonise ilogo entsha kunye nesihlangu sokuqala esiphakamileyo seNike esihonjiswe ngeSwoosh yayiyiNike Blazer ngo-1973. Ngelixa umbala obomvu ofudumeleyo wakhawuleza waba ngumbala wokhetho kwilogo esemthethweni- hayi emnyama sihlala sibona ngoku-isihlangu se-on-shoe uSwoosh senzelwe ukuxuba imibala yesazisi esibonakalayo esiphezulu.
UTodd Radom, igqala lomyili wezemidlalo odale amanqaku kwi-Super Bowls ezingenakubalwa, iminyhadala ye-NBA, iminyhadala ye-World Series, kunye namaqela kuwo onke amanqanaba ezemidlalo, uthi ngelixa u-Nikes Swoosh engelulo uphawu olugqibeleleyo-ukungagungqi okugabadeleyo kusilela kwezona ndlela zintle kwimiba ethile-isiqingatha senkulungwane emva kokudalwa kwayo, iye yaba yenye yeempawu ezikhethiweyo ezinokuqondwa ngokukhawuleza, ezaziwayo kwihlabathi liphela.
I-Davidsons yasekuqaleni ngo-1971 i-Stripe-to-Swoosh yoyilo kunye ne-script lettering egcinwe ngokukhawuleza njengophawu olusemthethweni lwe-Nike, kodwa kwiintsuku zokuqala abaqulunqi basebenzise ngakumbi njengetemplate kunokuba bayilwe.
Uyilo lukaDavidson lubambe uzinzo de kwafika utshintsho ngo-1976 xa ifonti yafudukela e-Futura kwaye amagama ayekwa ngokusesikweni ngokupheleleyo ngo-1995. Inkampani itshintshe umbala obomvu oshushu uye kwi-orenji, umbala wophawu namhlanje.
Wayengu-trendsetter, utshilo uRadom. U-Nike uye wawisa i-letterform yesibindi ye-Futura enesibindi eyayitshixiwe kunye ne-Swoosh phakathi kwiminyaka yama-90, ingxelo ebhaliweyo ekhokelele kwindlela eya kwiqela labathengi ababalaseleyo abajonga amagama kunye nombala wobunini ngokuthanda i icon elula.
URaisch uthi ukuba ujonga ezinye iilogo ezenziwe ngo-1971- nokuba ingaba yi-Starbucks yasekuqaleni iSiren okanye nokuba yi-PBS- ijongeka ngokungathi zenziwe ngo-1971 kwaye ziye zane-tweaks kule minyaka ingama-50 idlulileyo ukwenza lula. Wasinda njani uNike Swoosh? Kukulula nje okulula, utshilo u-Raisch. Kwakungekho nje ukusuka kumaxesha kwaye ngenxa yoko kwakungaphelelwa lixesha.
yonke imikhosi ephezulu yomoya ephezulu emnyama
Ngelixa izizathu zomthetho kunye nentengiso zigcine uSwoosh wanamhlanje ehambelana ngokubanzi kwizihlangu zaseNike, amathuba okhetho olukhethekileyo, njengokubambisana kweREADYMADE-sinokubona ngakumbi i-O.G. Ukudlala kwe-Swoosh kamva ngo-2021 njengoko uNike ebhiyozela isikhumbuzo se-Swoosh-unika ithuba lokudlala kunye nokuyila kunye nokufaka imibala. Kule meko, i-Swoosh ithatha ukubonakala okucekeceke kwaphela, kodwa inesidima esiphakathi, inika le nguqulo yeBlazer ukuba ibe sisinye kwisimboli sezihlangu.
kude kube nini ukubetha idonki kong 64
injani isipili njenge-glaze
Ngaba ugeorge uphume ejele